हाम्राे पिपलबाेट » महेन्द्रले बसालेको बस्तीमा अहिले सम्म विकास हुन सकेन् महेन्द्रले बसालेको बस्तीमा अहिले सम्म विकास हुन सकेन् – हाम्राे पिपलबाेट
महेन्द्रले बसालेको बस्तीमा अहिले सम्म विकास हुन सकेन्
२०३५ सालमा महेन्द्र राजाको पालामा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र रहेको बस्ती उठाएर हालको बाँकेको बैजनाथ गाँउपालिका वडा नं. मा ४ बस्ती बसालिएको थियो । करिब ४ सय घरदुरी रहेको उक्त बस्तीमा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन् । बस्ती बसाल्लेको १७ वर्ष पछी २०५२ सालमा बस्तीका बासिन्दाहरुले लालपुर्जा प्राप्त गरेका थिए । लामो समयपछिको दुख र मिहेनेतले राराबस्तीमा बत्ती बाल्न स्थानियबासी सफल भए ।
हाल स्थानिय सरकारमा जनप्रनिधि निर्वाचन भएर आइसकेपछी पनी उक्त ठाँउमा कुनैपनी विकास निर्माण हुन सकेको छैन् । स्थानिय सरकार बनेको ३ वर्ष भइसक्दा पनी गएको आर्थिक वर्षमा सडक निर्माणका लागि १० लाख रुपँया पानी टंकीदेखी गोरखा कृषि कलेज सम्म जाने बाटो ग्राभेलका लागि बिनियोजित गरिएको र पछि रकमान्तर गरि अर्को ठाँउमा बजेट प्रयोग गरिएको स्थानिय राराबस्तीका बासिन्दाहरुले आरोप लगाउदै आएका छन् । विकास निर्माणका हरेक कामहरुमा टोलबासीको पहुँज नहुदा वडाबाट प्रदान हुने हरेक विकास निर्माण र सेवा सुविद्याहरु उपभोग गर्न नपाएकोे स्थानियबासी लालशिह भण्डारी बताए । भण्डारीका अनुसार पटक पटक वडा अध्यक्षलाई आफुहरुले सडक निर्माणका लागि माग लिएर गएता पनी कुनै सुनवाई नभएको दुखेसो पोखे ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको पैसा ग¥यो खोलैखोल
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत बैजनाथ गाँउपालिका वडा नं. ४ लाख रकम बिनियोजित भएको थियो । उक्त रकमबाट सडक मर्मतका लागि खर्च गरिएको थियो । बैजनाथ गाँउपालिका वडा नं.४ का ३ वटा बस्तीमा खर्च गरिएको स्वरोजगार कार्यक्रमको रकमले मर्मत गरिएको सडक अहिले हिलाम्मे भएका छ । बैजनाथ ४ का वडाअध्यक्ष कालि बहादुर शिहका अनुसार सडक मर्मतका लागि स्वरोजगार कार्यक्रममा ६० जना कामदारले काम गरेको र अपुग रकम मर्मत कोषबाट खर्च गरिएको बताएका छन् । तर सडकको अवस्था भने नाजुक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा दश लाख रकम बिनियोजित गर्ने बडा अध्यक्ष सिहको भनाई रहेको छ ।
यसरी पटक पटक सानो रकम बिनियोजित गर्ने र सडकको अवस्था जस्ताको त्यस्तै हुनाले स्थानियबासीहरु आक्रोसित बनेका छन् । उक्त सडकमा हाल खसालिएको ग्राभेल कनिका छरे बराबरको भएको छ । अहिले उक्त सडक खण्डमा स्थानियबासीहरुलाई आवतजावत गर्न समेत कठिनाई भएको स्थानियबासी धर्मजंग शाहले बताए । स्थानिय सरकार भएको त्यहाँका स्थानिय बासीहरुले अनुभुती समेत गर्न नपाएको सोही वडाका स्थानियबासी केशब शाहले बताए । उक्त राराबस्तीका बासिन्दाहरुले सडक निर्माणका लागि व्यक्तिगत रुपमा रकम खर्च गर्दै नाली निर्माण, माटो फिलिङ्ग गर्ने काम गर्दै आएका छन् । महेन्द्रले बसालेको बैजनाथ ४को राराबस्तीमा सवारी साधनहरु लिएर हाल जान सकिने अवस्था भने छैन ।